အထွေထွေသတင်းများ Archives - Pissaya News
မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်အချိန်အခါမှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဒီနှစ်မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားလမ်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတော်ရက်များကိုတော့ သင်္ကြန်ရက်များအတိုင်း (၄) ရက်ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အင်းယားကန်ဘောင်တစ်လျှောက်မှာလည်း Colour Festival Theme များ၊ Splash Walk Activites များ အပြင် နံသာရည်ပတ်ဖြန်းခြင်း စသည့် အစီအစဉ်များလည်းပါရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးမှ ကြီးမှူးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအင်းယားလမ်း မှာပထမဦးအကြိမပြန်လည်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ #Pissaya_News Photo;Crd;
နို်င်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုတွေနဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကိုထောင်ဒဏ် ၂၂ နှစ်ချ
့ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်တို့နှစ်ဦးကိုနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုတွေနဲ စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးက ဒီကနေ့မှာ ထောင်ဒဏ် ၂၂ နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကို နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုပုဒ်မ ၁၂၂ နဲ့ ထောင်ဒဏ်နှစ် ၂၀ ၊နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေ မှုပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် စုစုပေါင်း၂၂ နှစ်ကို တစ်ပေါင်း တည်း ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ ဟောပြောချက် တစ်ချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ #Pissaya_News Photo;ယခင်ရုံးချိန်များတွင် ဒေါက်တာအေးမောင်ကို ရုံးထုတ်လာစဉ်
အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးယာဉ့် တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် လူ ၅ဦးသေဆုံး၊ ၂၇ဦးဒဏ်ရာရရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကနီမြို့နယ် အလောင်းတော်ကဿပလမ်း ၁၆မိုင် ၄ဖာလုံမှာ ဒီကနေ့ မနက် ၆နာရီဝန်းကျင်က ဘုရားဖူး Expressယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် လူ ၅ဦးသေဆုံးကာ ၂၇ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံရဲ့အတည်ပြုချက်ကို ပြည်တွင်းမီဒီယာတခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘုရားဖူးယာဉ်ဟာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ချောင်းမကျည်းအနီး လမ်းညာဘက်တောင်ပေါ်တက်လမ်း ပေ ၂၀၀ခန့်ရှိတဲ့ ချောက်အတွင်း ထိုးကျထိန်းမှောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ #Pissaya_General News
ငွေကျပ် ၂၈,၉၅၇သိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ
ငွေကျပ် ၂၈,၉၅၇သိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားတွေကို တောင်ငူမြို့၊(၄)မိုင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တောင်ငူမြို့ (၄)မိုင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ HINOအမျိုးအစား(၆)ဘီးမော်တော်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးရန်ရပ်တန့်ခိုင်းရာမှာ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက် ပိတ်ဆို့ရှာဖွေရာမှာ ပီနံအိတ် ၃ အိတ်အတွင်းမှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၉၆၅,၂၅၀ ပြား၊ ငွေ ၉၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာလည် ဖြစ်ပါတယ်။ #Pissaya_Crime News
အဂတိလိုက်​စားမှုတွေကို ထိထိ​ရောက်​​ရောက်​ ကိုင်​တွယ်​မယ်​လို့ သမ္မတရုံး​ပြော​ရေးဆိုခွင့်​ရှိသူ ပြော
လက်​ရှိအစိုးရလက်​ထက်​မှာ အဂတိလိုက်​စားမှု​တွေနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး ထိထိ​ရောက်​​ရောက်​ ကိုင်​တွယ်​မယ်​လို့ သမ္မတရုံး​ပြော​ရေးဆိုခွင့်​ရှိသူ ဦး​ဇော်​​ဌေးက ဒီကနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ နေပြည်​​တော်​ရှိ NRPCမှာ သတင်းမီဒီယာ​တွေနဲ့​တွေ့ဆုံစဉ်​ သမ္မတရုံး​ပြော​ရေးဆိုခွင့်​ရှိသူက အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ၀န်ချုပ်အဆင့်ထိပါ အရေးယူထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ #Pissaya_General News
ဒေါ်နယ်ထရန့် နှင့် တွေ့ ဆုံဖို့ ဗီယက်နမ်သို့ကင်ဂျုံအွန် ရောက်ရှိလာ
ဒုတိယအကြိမ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက် မြောက်ကိုရီယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန် ဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မြောက်ကိုရီယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန် ဟာ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ဗီယက်နမ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအတွက် ခေါင်းဆောင် ကင်ဟာ ၂ ရက်ခွဲကြာမီးရထားစီပြီး ခရီးရှည်လာရောက်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ #Pissaya_Interanational News
သေနတ်သမားများရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပါကစ္စတန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသေ၊ အခြား ၄ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ Punjab ပြည်နယ်မှာ မနေ့ညပိုင်းက အမည်မသိသေနတ်သမားတစ်ဦး ရဲ့ ဝှေ့ယမ်းပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားလူ ၄ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သံသယဖြစ်ဖွယ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအား စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ရပ်တန့်စစ်ဆေးစဉ် ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ သေနတ်သမားတွေဟာ ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်ပွားရာမှ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာ ဘယ်အဖွဲ့ရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။ #Pissaya_International News Photo Crd; ယခင်တိုက်ခိုက်မှုတွင် တွေ့ရသည့် ဓာတ်ပုံ
အသည်းအကျိတ် ကျန်းမာ​ရေးအ​ခြေအ​နေ​ကြောင့်​ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး သုံးလကြာအနားယူမည်​
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်​ကြီး ​ဒေါက်​တာနန္ဒမာလာဘိဝံသသည် အသည်းအကျိတ် ကျန်းမာ​ရေးအ​ခြေအ​နေ​ကြောင့်​ ခရီးသွားလာခြင်း ၊ဟောပြောခြင်းများကို သုံးလကြာ ရပ်နားထား၍ အနားယူရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးသည်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာ​ရေးစစ်​​ဆေးမှု ပြုလုပ်ချက်အရ သုံးလအတွင်း ၁ ဒဿမ. ၄၃ စင်တီမီတာ မှ ၂ဒဿမ. ၂၁ စင်တင်မီတာခန့်အထိ အရွယ်အစား ကြီးလာသော အသည်းရှိ အကျိတ်ကို Radio Frequency Ablation (RFA) နည်းစနစ်ဖြင့်ကုသမှုခံယူထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုခံယူထားတဲ့ Biopsy အဖြေရယူစစ်ဆေးရာတွင် ကင်ဆာဆဲလ် မတွေ့ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ #Pissaya_General News
ဥပါယ်တံမျဉ် ရုပ်ရှင် မူပိုင်ခွင့် ချိုး⁠ဖောက်⁠ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်⁠ပြီး အ⁠ရေး ယူ⁠တော့မည်
အချိန်ပိုသွင်းဂိုးနဲ့ ချယ်လ်ဆီး ဆီးမီးတက်
ပရိသတ်တွေရဲ့  Birthday Surprise ကြောင့် အပျော်ကြီးပျော်ေ နတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်